Ukubuyekezwa: 'Grey Wolf', kaJames Nava | Izincwadi Zamanje
Impisi Emnyama Kuyinto a indaba ethinta inhliziyo, iphathwe ngobuciko, ehlanganisa ngokuhlakanipha imigqa ehlukahlukene yokulandisa, lapho uthando, ubungane, ukwethembeka, kepha futhi nomzwelo nezenzo kukhona. Ngithole kule noveli a ukuphakanyiswa kwamagugu esintu okubaluleke kakhulu, kuphathwa ngokugqama ekwakhiweni kwezinhlamvu zabo.
UJames nava kwembula kule noveli ukuzwela okukhulu maqondana nomuntu kanye nemvelo. Kubhalwe ngothando, kulula ukungena emlandweni we Impisi Emnyama. Le noveli ikukopela kwasekuqaleni, hhayi ngoba ngisebenza ngokugcwele. Ngokungafani. INava iqala indaba ngendlela ezolile, ijabulisa izincazelo zemvelo, abalingiswa futhi, ngaphezu kwakho konke, izigcawu zokuqala, ukuhlangana kokuqala. Kodwa-ke, uNava uphatha isigqi sokulandisa ekupheleleni, esheshisa kahle ezikhathini ezinzima kakhulu.
Ukufunda Impisi Emnyama Ngikujabulele ngokukhethekile i- izincazelo, ikakhulukazi nalawo amasimu ahlukahlukene nezinto zemvelo zaseMontana naseRocky Mountains. Ngaphandle kokuthi indaba yenzeka endaweni eqanjiwe, iWild Creek, idolobha elasungulwa nguJames Nava likucwilisa ngokuphelele kuzindawo zasemakhaya zangempela zaseNyakatho Melika, kubantu balo. Ngikuthokozele futhi izigcawu zesenzo, ikakhulukazi lezo izimpisi ezibandakanyeka kuzo, yize kungathandeki kangako izigcawu zokulwa kuhlonyiwe, noma ngisho nezigcawu ezinokuqukethwe okuvusa inkanuko futhi okuvusa inkanuko.
4 Ukuhlolwa kokugcina
Isakhiwo sale ndaba, esifanele i-movie enhle noma uchungechunge lwethelevishini, sigcwele izinsiza ezithokozisayo. Ngakolunye uhlangothi, sinefayela le- Indaba yothando yabalingiswa bayo, UJason noCatherine, othuthuka kusuka kokungokwenyama kakhulu kuya ekuzweleni kakhulu, ngaphandle kokulahlekelwa ngumdlandla nokuvusa inkanuko. Ngakolunye uhlangothi, sinendaba yezimpisi, okufanele zinqobe usongo oluphindiwe futhi ngokungazi zibe maphakathi nendaba. Ngoba isizathu sangempela sendaba asaziwa kuze kube phakathi nendaba, yize ikhula kancane kancane ngezingxoxo zabalingiswa bayo. Siyayazi impela, ngoba ikhava selivele liyasitshela, yize kulula ukuyikhohlwa uma uzivumela ukuthi uthathwe ukulandisa.
Indaba enikeza umzimba kule noveli, lapho kuhlanganiswe khona izinsongo zamaphekula e ubuqili bezepolitiki, ikhombisa ulwazi olukhulu umbhali analo ngalo mhlaba. Akumangalisi ukuthi uJames Nava wajoyina uphiko oluphakeme e-US Army eneminyaka eyi-17 futhi, ngaphezu kokuba ngumxhumanisi omkhulu we-Special Forces kanye ne-Intelligence Community yaleli zwe, ungumeluleki onguchwepheshe ezindabeni zaseMelika futhi usebenza njengo umeluleki wezempi nowezobunhloli.
Intshisekelo ejulile yomlobi, kokubili emasikweni adumile nasenkambisweni yomdabu, nayo iyabonakala kule noveli, lapho izindinganiso zomuntu ezisebenzisana nazo nazo zikhonjiswa kwezemvelo nezemvelo, maqondana nezikhala zemvelo, uNava athi ngokuphelele kule ndaba. Ucwaningo lwakhe oluphelele nentshisekelo yokuthola imithombo yolwazi ethembekile kunika le ndaba isisekelo esiqinile sokwakhela ukulandisa.
Amakhasi angama-495 encwadi ahlukaniswe izahluko ezingamashumi amabili nanhlanu - ahlukaniswe izigaba eziyi-133 - i-epilogue nenothi lombhali. Lezi zingxenye zikwenza kube lula ukufunda, okujabulisa kakhulu futhi okulula ukulandela. Ukwelashwa komlando nejubane elithathayo kuvumela bobabili abantu abathanda ukufunda kancane kancane - noma banokukhetha okuningi - futhi labo abadla izincwadi futhi abachitha amahora befunda bangakuthokozela ukufunda kwabo.
Ama-protagonists, umbhangqwana osemusha onothando olufanayo ngemvelo, izilwane zasendle kanye nezimpisi, uxhasa indaba lapho uthando nentshisekelo ihlanganisa konke, ngayo yonke indlela. Bobabili banqoba izithiyo ngokuhlala beqinile kumagugu abo, futhi bagcine ubudlelwane lapho ukuhloniphana kunqoba khona konke okunye. Indlela kaJason Rovin noCatherine Rush ingithokozise ngayo.
Omunye umuntu obalulekile endabeni umphenyi wedolobha. Angikwazi ukuzibamba kepha ngiphawule ngokuthi igama lalo mlingisi lingishaye kanjani: isheriff I-Thorpe. Ekuqaleni ngangingakuqapheli, ngoba ngangikufunda ngqo esiNgisini, kodwa ngelinye ilanga amehlo ami awela ezinhlamvini ngaphandle kokuqhubeka futhi ngazifunda njengoba zazizofundwa ngeSpanishi. Futhi ngangijabule ngempela. Iqiniso ukuthi isheriff ewumbumbulu ayinalutho, okuphambene nalokho, futhi ngenze ucwaningo oluncane ngegama lelo, okusobala ukuthi, lisho into efana nokuthi "kusuka emzaneni." Angazi noma uNava uzokucabanga lokhu noma cha, kepha kubukeka kufaneleke kakhulu.
Omunye umlingiswa obaluleke kakhulu ngusomabhizinisi wasedolobheni, uTed Morgan III, kanye nabo bonke abalingiswa abamzungezile. Ayigcini ngokubaluleka okubalulekile emlandweni, kepha ukwakhiwa kwayo kumele yonke into enecala ngohlanga lwesintu. Uqukethe ubuntu obubi kakhulu, kanye nawo wonke umuntu omzungezile, ikakhulukazi unobhala wakhe, omele imodeli ethile yesifazane. Zombili izinhlamvu zakhiwe kahle futhi zisingathwa kahle.
Inhloko yamasosha ingomunye umlingiswa obaluleke kakhulu. INava imchaza kahle kakhulu, ngokomzimba nangokwengqondo. Labo abaseduze kwakhe nabo baphathwa ngokujula. Kubalulekile ukuqonda umlando. Kepha angikwazi ukukutshela okuningi ngaphandle kokumosha indaba.
Ngishiye kuze kube sekugcineni umlingisi onikeza le ndaba igama layo nokuthi ngubani, ngaphandle kokuba ngumlandeli ophelele, oyisikhungo sesakhiwo. Impisi empunga, kepha hhayi noma yimuphi, kepha owesilisa we-alpha, uSishika, impisi exhumene nesikhathi esedlule, samanje kanye nekusasa leWild Creek nomlando we-protagonist. Izikhathi lapho le mpisi ivela emlandweni zibalulekile. Yonke imilingo le ndaba enayo, uyiqonde ngokomzwelo-futhi hhayi ngombono omuhle, inale nsizi.
Impisi Emnyama, Inoveli kaJames Nava yesithathu, yashicilelwa okokuqala ngo-2008. Ukuphinda kukhishwe ngo-2014 ngu Izincwadi zeSniper inwebisa uhlelo lwangempela, ithola imibhalo esuswe enguqulweni yokuqala futhi ingeze izinto ezintsha zokunothisa indaba. Ikhava, elenziwe nguJosé del Nido, lingumfanekiso oveza kahle ngokuphelele ingqikithi yabalingiswa abakhulu.
Incwadi enesembozo esithambile enamaphiko futhi ibhukumaka efakiwe imnandi kakhulu ezandleni futhi kulula ukuyiphatha, naphezu kosayizi wayo. Uhlobo olukhethiwe, usayizi wefonti nokuhlukaniswa kwemigqa kwenza ukufunda kube lula futhi kungafundwa ngaphandle kokukhathala isikhathi eside - uma unenhlanhla yokuba nakho.
Kufanele ngivume ukuthi ngivame "ukudla" lezi zinhlobo zezindaba kwifomethi yefilimu noma yethelevishini, ngakho-ke ngithole uqobo lwendaba ethokozisayo engizoyifunda. Ekuqaleni kwangithatha kancane ukungena kwisigqi, ngokunembile ngoba esikrinini, lezi zinhlobo zezindaba zivame ukuba namandla kakhulu ekuqaleni. Kepha ngasheshe ngafunda ukukujabulela ukufunda, ngoba ukuxoxa izindaba kukubamba ngemininingwane ejulile. Akunandaba, indaba ilula ngokwanele futhi ayikaze ibhajwe noma izule.
Ezingeni lokulandisa, ngithande izinto ezimbili ngaphezu kwakho konke. Eyokuqala, indlela yokuqeda ukuphela kwesigaba noma isahluko; enye, indlela ukungezwani okwakha ngayo kuze kufike emvuthwandaba.
Kade ngifuna uJason Rovin owengeziwe, futhi ngithanda ukuthi uNava abuye abuye abalingise ngokuzayo, emdlalweni omusha.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Amabhuku » Buyekeza: 'IGrey Wolf', kaJames Nava
Ngibhalisela umbono wakho kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni futhi ngiyakuqinisekisa ukuthi udaba lukaSheriff Thorpe lwalungeyona into engahleliwe. UJames Nava akalokothi ashiye noma yini ize ngengozi. Uhlala enesizathu sokwethula izimo nabalingiswa, kufanele nje ukuthi ukufune futhi usitholile. Kuyiqiniso ukuthi ulandisa imihlaba, amasiko, izimo zazo zonke izinhlobo ngokungafani nomunye umuntu. Unguthisha futhi thina esifunde wonke amanoveli akhe sazi kusuka ngomzuzu wokuqala.
Yinhle kanjani, ngizoyibhala phansi, nginobuthakathaka obukhethekile kulo mongo. Nginamacici uCentaurs of the Desert ka-Alan Le May.
Futhi uma uthanda iMelika ngasekupheleni kwekhulu le-XNUMX nakho konke okuphathelene namaNdiya, kufanele ngincome iCrazy Horse and Custer: Parallel Lives of Two American Warriors nguStephen E. Ambrose ngikushiya ukubuyekeza kwebhulogi yami uma kwenzeka banesithakazelo http://www.nachomorato.com/caballo-loco-y-custer/ Ngeke kukushiye ungenandaba.
Ingabe ikhona enye incwadi ethakazelisa ngokwengeziwe?
montserret fernandezpacheco kusho
Ngilinde ukuthunyelwa kwencwadi entsha ye-GRAY WOLF ... kepha ngiyifunde kaningana ... UJAMES NAVA ungumbhali omuhle kakhulu ... ngangivele ngamtshela eminyakeni edlule ... ukuthi naye, ngangingenza ibhayisikobho enhle ... izindawo ezimangalisayo ... ubukhosi ..., ama-ranches amakhulu ... uthando olukhulu ... ngiyayikhumbula impisi..inja enkulu kaRobin ... futhi ngahlala esihlalweni esidala esinyakazisayo epulazini. .lolo ebelusemphemeni..kanti yilokho: NGAPHUPHA LE NOVELI ... NGIHLALILE ENDLELWENI ... NGIWE NGITHANDANA NOBUMNANDI BUKROBIN ... Ngoba uJames Nava ubhala kahle kakhulu .. amanoveli akhe ... enza ukuthi uhlale nawo ... ukuthi njengamanje ngingahambela amakamelo eRanch ... ngaphandle kwalapho kulolu hlelo benze ukulungiswa »… Futhi ngizohewula njengabangane bami izimpisi… nokuthi ngikweluleka… ukuthi uthenge inoveli… ngeke uzisole….
Phendula ku-montserret fernandezpacheco